खर्च विवरण बुझाउन दलहरुकाे अटेरी किन ? – www.agnijwala.com
खर्च विवरण बुझाउन दलहरुकाे अटेरी किन ?
नेपालगन्ज । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । ५ र ६ नम्बर प्रदेशका बाँके, दाङ, सुर्खेत, जुम्लालगायत जिल्लामा आलटाल भइरहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएका छन्।
क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय नेपालगन्जका कर्मचारीले पटकपटक विवरण बुझाउन उम्मेदवारको ध्यानाकर्षण गराए पनि उनीहरुले अटेरी गर्दै आएका छन् । अाजकाे नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
गत मंसिर २१ गते सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत बाँकेमा ३ वटा क्षेत्र रहेको प्रतिनिधिसभा र ६ वटा क्षेत्र रहेको प्रदेशसभामा गरी कुल १ सय ३ जना उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका थिए । क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय नेपालगन्जका सूचना अधिकारी काशीलाल अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म २ उम्मेदवारले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
कांग्रेसको तर्फबाट प्रदेशसभा १ (क) का उम्मेदवार शरदचन्द्र बर्मा र प्रदेशसभा १ (ख) का नारायणप्रसाद गौडेलले खर्च विवरण बुझाएका छन् । गौडेलले आयोगद्वारा तोकिएको सीमा १५ लाखभन्दा केही कम र बर्माले ९ लाखको खर्च विवरण पेस गरेका छन् । ‘चुनावका बेला बिल भरपाईको ख्याल गरेर राखिएन, यसपटक निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाउँदा जुटाउन धेरै गाह्रो भयो,’ बर्माले भने । अर्का उम्मेदवार गौडेलले निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा भएको व्यवस्थाअनुसार तोकिएभन्दा बढी खर्च नगरेको बताए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) मा निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख वसन्तराज अधिकारीले बाँकेमा १ सय १ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको बताए । खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ । ‘चुनाव सम्पन्न भएको एक महिना पुग्न लागिसक्यो, उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन्,’ अधिकारीले भने।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाका लागी बढीमा २५ लाख र प्रदेश सभाको हकमा १५ लाख रुपैयाँ उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । खर्च विवरण बुझाउँदा आयोगले बिल, भरपाई, रसिदलगायतका कागजात माग्ने गरेको छ ।
सुर्खेतमा चारजनाले बुझाए
सुर्खेतमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी ५८ उम्मेदवारमध्ये चारजनाले खर्च विवरण बुझाएका छन् । सूचना अधिकारी नवीन पौडेलका अनुसार नेपाली कांग्रेसबाट क्षेत्र नम्वर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार पूर्णबहादुर खड्का, क्षेत्र नम्वर २ का उम्मेदवार हृदयराम थानी र प्रदेशसभा २ (क) का उम्मेदवार कमलराज रेग्मी तथा नेकपा एमालेबाट क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार नवराज रावतले खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
कार्यालयका अनुसार खड्काले पुस १६ गते, थानी र रेग्मीले पुस १३ गते तथा रावतले १९ गते निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाएका हुन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार खड्काले १९ लाख ४९ हजार ५०, थानीले १२ लाख ३० हजार र रावतले १२ लाख तीन हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् । यस्तै रेग्मीले तीन लाख आठ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् । दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुर्खेतमा प्रतिनिधिसभातर्फ १९ र प्रदेशसभातर्फ ३९ गरेर ५८ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए ।
म्याद गुज्रिँदासमेत चुपचाप
जुम्लामा निर्वाचन सकिएको डेढ महिना बित्दासमेत उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचन परिणामसँग सबै उम्मेदवार र विजेता सांसद राजधानी केन्द्रित भएकाले खर्च विवरण बुझाउन आलटाल भइरहेको निर्वाचन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ।
अहिलेसम्म एमालेका प्रदेशसभा उम्मेदवार पदमबहादुर रोकाया, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार डिल्लीप्रसाद काफ्ले, प्रदेशसभा (क) का शिवलाल डाँगी र (ख) का गोर्खबहादुर बुढाले मात्र खर्च विवरण वुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी खुमप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।
जुम्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १० जनाले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।автоматизированныйddos телефопмж выехатьrussieкупити жерлиціинтернет через мтс